Maxay tahay Cabsida dhanka doorashadda ee laga qabo Fahad Yaasiin? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay tahay Cabsida dhanka doorashadda ee laga qabo Fahad Yaasiin?
Wadada uu u marayo inuu ku gaaro hadafkan ayaa ah gudiyadda doorashooyinka inuu xubno badan oo NISA katirsan ku daro, iyadoo qorshuhu yahay in codadka loogu shubo Xildhibaannada taliyaha uu wato.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahad Yaasiin wuxuu diyaarsaday qorsho culus oo la dejiyay kahor inta uusan dhamaan muddo-xileedka Farmaajo 8-dii Febuary 2021, kaasoo uu ku afduubayo doorashadda la filayo inay dalka ka dhacdo bisha July.
Fahad wuxuu gacanta ku hayo liis dheer oo Xildhibaanno ka dhigayo, kuwaasoo kasoo baxaya saddex Maamul Goboleed ee uu isaga dhisay, kuwaasoo kala ah Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Musharixiinta qaarkood, oo uu kamid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa caddeeyay faragelinta Fahad ee doorashadda, isagoo qiray in Xildhibaanada imaanaya ay dhamaantooda diyaarsan yihiin.
Musuq-maasuqii dhacay doorashadii 2016-2017 mid ka xoog badan ayaa soo socota, madaama uu sanadkan Villa Somalia uu fadhiya Fahad Yaasiin oo adeesanaya maalaayiin dollar oo Qatar ka helay.
Maamulka Koonfur Galbeed oo ka imaanaya Xildhibaanada ugu badan oo gaaraya 67, waxaa ka taliya Lafta-Gareen oo guul-wade u ah Fahad iyo Farmaajo, maadaamo iyagu ay u afduubeen doorashadda.
Sidoo kale, Qoor-Qoor waa adeegge kale oo Villa Somalia laga diray, isagoo Wasiir ku-xigeen ah ayaa loo dhiibay talada Galmudug, wuxuuna ku qasban yahay in Xildhibaannada ka imaanaya degaanadiisa ka dhigo kuwa uu Fahad rabo.
Guudlaawe wuxuu ku qalan yahay inuu qaado jidka ay Lafta-Gareen iyo Qoor-Qoor mareen, maadaama uu madax ka yahay Maamulka ugu jilacsan shanta Maamul ee ka dhisan Soomaaliya, lana bedeli karo.
Way ku filan yihiin Fahad Xildhibaanadda 3-dan Maamul uga imaanaya, oo u codeyn doono Farmaajo oo lagu wado inuu dhawaan ku dhawaaqo Musharaxnimadiisa, isagoo mar 2aad xukunka raadinaya.
CC Warsame ayaa xusay in Fahad uusan lamid ahayn Taliyaasha kale ee Booliska iyo Militeriga, oo dhexdhexaad ka noqday arrimaha doorashadda, wuxuuna noqday ninka jaan-gooya siyaasadda dalka.
Maadaama dalka awood Ciidan ku afgembin waayay, waxaa laga cabsi qabaa in Fahad doorashadda afduubo, kana dhigo mid uu isaga go’aamiya cida Xildhibaan noqonaysa iyo midka aan noqonaynin.
Rajada Musharixiinta aad uma sareyso, waxayna ujeedaan in dalka aan ka dhici doonin doorasho loogu tartamo si xor iyo xalaal ah, maadaama hanaanka lagu qabanayo codbixinta asan ahayn mid hufan.
0 Comments Topics: doorashadda fahad yaasiin nisa soomaaliya